Burmese – Tractor Loader
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာထုတ်ကုန်အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြစ်ရာကနေတောင်သူလယ်သမားလယ်ယာဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ, သင်ကဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကြောင့်စျေးကွက်လေ့လာမှုနှင့်ကုန်စည်ရောင်း၏ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်ရှုပ်ထွေးသောအမျိုးမျိုး, အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ် Mini-ထုတ်လုပ်မှုမှာသေးငယ်တဲ့ကူညီနေတဲ့နိုင်ပါတယ်။
1. Biogas ထုတ်လုပ်မှုဆိုလိုသညျအသုံးမရသောဖြစ်ပါသည် ပိုကပိုကြွေးမြီထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါဟာလျှပ်စစ်စျေးကွက်စျေးနှုန်းထက်သုံးဆပိုများပြီးဖြစ်သင့်သော, တစ်ဦးအခွန်ကိုဖုံးလွှမ်းသင့်ပါတယ်။ Payback ပင်7နှစ်ကနေအသင်္ချေအထိ biogas စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့။ စျေးကွက်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောရေရှည်ရန်ပုံငွေများရိုးရှင်းစွာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး . အကောင့်ထဲသို့ပိုက်ဆံ၏တန်ဖိုးကို, တနှစ်လျှင်ပင် 15% ၏အဖြစ်မှန်ယူခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအစဉ်အဆက်ကိုချွတ်ပေးဆောင်ကြပါဘူး။
အဆိုပါကျင်းပေါက်များနှင့်ပိုက်လိုင်းတူး၏ဖြစ်စဉ်ကိုလာမယ့်တစ်ဦး UOP တပ်ဆင်နှင့် GB ကိုသုံးပြီးထားကြ၏ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်စက်မှုတူးဖော်ခြင်းတင်သောစဉ်အတွင်းကြိတ်ဦးခေါင်းမှထွက်ယူသွားတတ်၏, နှင့်မြေဆီလွှာကိုဖြေလျော့ဖယ်ရှားခြင်း – တစ်ဝက်အူပေါ်ကို။ သင်္ဘောသဖန်း။ 21.6, ခ။uGB လယ်ထွန်စက်ကို T-သန်း 100 ၏အခြေခံပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတစ်ဦးတပ်ဆင်ခပြသထားတယ်။
Hercules Logistics Co.,Ltd သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့လေးမြို့တွင် ရုံးစိုက်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Hercules Logistics Co.,Ltd သည် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အဓိက ဆောင်ရွက်ရုံသာမကပဲ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ကုန်စည်မှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း အပါအဝင် ဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်လုံး အား အသေးစိတ်ထောက်ပံ့မှု လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်အရ ပြည့်မီစေရ​ေးအတွက် ၃တန် မှ တန်(၃၀) အထိ Cargo များ သယ်ဆောင်နိုင်သော မ​ော်တော်ယာဉ် အစီးရေ (၂၀) ကျော်ဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မော်တော်ယာဥ် အမျိုးအစားများတွင် IVECO၊ Mitsubishi စသော ထရပ်ကားအမျိုးအစားများစွာ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် Customerများအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် GPS စသော Online စနစ်များ တပ်ဆင် အသုံးပြုထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကျွန်တော်တို့ လက်ကိုင်ထာူသော ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “ Customerများ၏ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အောင်မြင်မှုပင် ဖြစ်သည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
DPI နည်းပညာ ကိုသုံးပြီး IBM (အိုင်ဘီအမ်) သို့မဟုတ် Dell Linux ( ဒဲ(လ်) လင်းနပ်(စ်)) ဆာဗာများ ပေါ်တွင် မောင်းနှင်သော နာရပ်(စ်) ဝေါဟာရဆိုင်ရာ အသွားအလာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သည့် ဆော့ (ဖ်)ဝဲ(လ်)သည် လျာထားသော အီးမေး(လ်) လိပ်စာ၊ အိုင်ပီ လိပ်စာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ဖုန်းနံပါတ် တို့တွင် အခြေခံ၍ တိကျသော မက်ဆေ့(ခ်ျ)ကို ရွေးယူရန် ၁၀ ဂစ် ဂါဘစ်/စက္ကန့် လျှင်ရှိသော အသွားအလာ မှတဆင့် ရွေးသည်။ FISA (ဖီဆာ) ၏ အမိန့်စာ ကိုရယူခြင်း မရှိဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ လူများနှင့် ပြည်ပရှိ ၎င်းတို့၏ အဆက် အသွယ်များ အကြား အီးမေး(လ်) နှင့် တယ်လီဖုန်း အပြန်အလှန် ပြောဆိုဖလှယ်ခြင်းများကို လျှို့ဝှက်စွာ ကြားဖြတ်ယူခြင်းအား အမိန့်ပေးရန် သမ္မတ တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု သူတို့ ယုံ ကြည်ကြောင်း သမ္မတ George W. Bush (ဂျော့ ဒဗလျူ ဘု(ရှ်)) နှင့် ရှေ့နေချုပ် Alberto R. Gonzales (အယ်(လ်)ဘာတို အာ ဂွန်ဇါလီ(စ်)) တို့မှ အခိုင်အမာ ပြောဆိုသည်။ ကာကွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ အေဂျင်စီ မှ နက်ရှိုင်းသော အစုံလိုက် သုံးpacket စစ်ဆေးခြင်းကို အသုံးပြုသည့် အာရုံခံ စင်မြင့်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှမြှုပ်နှံအဆိုပါဆောင်းပါးများ, အများဆုံးမကြာခဏ biogas ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် feedstock အဖြစ်ချေးသုံးစွဲဖို့အားပေးတယ်။ မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖတ်ရန်: ကျေးလက် farmstead ထဲမှာ “Biogas” ချေးကနေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူခြင်း “”, “စတာတွေဂရိတ်ချေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ” ငါ biogas မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုအများအပြားကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အမြင်သင်ယူနှင့်ခြံ ekofermerskim မှလျှောက်ထားအဖြစ်အစားထိုးစွမ်းအင်၏ဤဧရိယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းငါ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းမယ်လို့မဆိုဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းပြချက်ရှာမခဲ့ပါဘူး။
ပိုက်စက်မှုလယ်ယာ Development နှင့်အတူ (Case) အချင်း 1720mm နည်းလမ်းအလျားလိုက်တူးဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်လာကြတယ်တင်သောနှင့် 60 မီတာဖို့ gasket စုစုပေါင်းအရှည်များအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီနှုန်း 10-12 မီတာစွမ်းရည်လုပ်ကြံရာမှမြေဆီလွှာကိုပို့ဆောင်ဘို့တပ်ဆင်ခ GB ကို-1621 အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပရွင္းလင္းခဲ့မႈမရွိခဲ့ျခင္းမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလုံး သိရွိႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ထြန္း ဟိုတယ္တြင္ သုဝဏၰဘူမိသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၅-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စာတမ္းဖက္ပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုအခ်ိန္က ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ မြန္သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပင္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္း ၉ ေစာင္ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္အသီးသီး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စတင္တူးေဖာ္သုေတသနျပဳရန္ လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။
ဒီဇိုင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း boring စက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ရှေ့: အဆိုပါဒိုင်းလွှားကိုသုံးအဓိကအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် – klinovidoy သူ့ကိုပျှမ်းမျှတစ်ဦး visor နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပုံစံမျိုးစုံဖြတ်တောက် – ဂျက်စီစဉ်ပေးနေကြသည်ကျသောရည်ညွှန်းနှင့်နောက်ဘက် – အမြီး။ ဒိုင်းလွှားကို manually သို့မဟုတ်နည်းစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်, နှင့်မြေပြင်အကွယ်အကာအားဖြင့်မြေပြင်ထဲသို့တွန်းချနေသည်။ မျဉ်း (နံရံများ) စုဆောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဒိုင်းလွှား၏နောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လည်ပတ်။ ဥမင်တူးဒိုင်းလွှားကိုမောင်းနှင်မှုပျဉ်ပြားကစက်မှု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစက်မှုလယ်ယာနှင့် Non-စက်တပ်သို့ခွဲခြားအောက်ခြေနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာမြေဆီလွှာ၏ထုတ်ယူခြင်း၏နည်းလမ်းပေါ် မူတည်. အရာ, 2-5 မီတာအပြင်ပအချင်းတွေနဲ့တော်တော်များများမျိုးလျှောက်ထားရန်။ စက်မှုလယ်ယာပြား Non-စက်တပ်ပိုမိုထိရောက်ပေမယ့်သုံးစွဲဖို့ခက်ခဲဖြစ်ကြပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြပြီးကျယ်ပြန့်ချင်းနှင့် 2.5 မီတာအတွက်စုဆောင်း၏နစ်မြုပ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ဒီေန႔ ထူးထူးျခားျခားေတြ႕ရတာကေတာ့ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရမ္းခါးေသး အရမ္းတင္ႀကီးေနတဲ့ ပဲခူးက ေက်ာင္းသူေလး တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ လက္ရွိ ပဲခူးတကၠသိုလ္တြင္ Botany ေမဂ်ာဘာသာရပ္ကို ေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Followers 83094 ရွိေနသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ ဆယ္လီတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္ သူမရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ SU …
Hinged slope ဗူးခွံယန္တရားအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီးမည်သည့်ခြံများတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗန်းဆည်မြောင်းယူနစ်၏လူမီနီယံပြွန်များ၏လုပ်နေကြတယ်ပါနဲ့။ ဝံဧရိယာပိုက်တစ်ကျင်းပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာဖှငျ့အတူတကွအတူအရာကြီးစွန်းတိုင်အောင်ယင်းမော်တော်ယာဉ်များ၏ဘောင်တွဲနေကြသည်။ ဒါဟာတစ်လျှောက်လယ်ထွန်စက်အောက်မှာမျဗန်း ။ အသီးကိုလမ်းဘက်လှိမ့်သောကြောင့်ဘေးထွက်သွားယူဗန်း၏နောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်း။ ဗန်းသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေအထားထ, အဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါကေဘယ်လ်ကြိုးအားဖြင့်ယူသွားတတ်၏။ သူတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေအထားအတွက်ဆင်ခြေလျှောကို 30 °ဖြစ်ပြီး, ပြုပြင်အတွက် – 6-7 °။
ကျိုးခြင်းဖြင့်ပိုက်၏အစားထိုးသည်အခြားနည်းလမ်းများကျော်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်။ အချင်းတိုးပွားလာပိုက်လိုင်းစွမ်းရည်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါမျှမအဆစ်ရှိပါတယ်တဲ့ပလပ်စတစ်ပိုက်သုံးနိုင်တယ်, လေးလံသောဝန်ကိုဆီးတားခြင်းနှင့် 50 တစ်ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိပါတယ်နိုင်သည် – နှစ်ပေါင်း 100 ။ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ပွင့်လင်းနည်းလမ်းများ ပိုက်နည်းလမ်းလက်ရှိဆက်သွယ်ရေးမှအပျက်အစီးနည်းအန္တရာယ်ပေးသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်အခြားတင်သောနည်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကဲ့သို့တူညီသောဒီဂရီအတွက်နေရာမဟုတ်ပါကြာပါသည်။ နောက်ဆုံးနည်းလမ်း၏နောက်ဆုံးထူးခြားတဲ့ feature ကိုကွန်ရက်များနှင့်အဆောက်အဦးများ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အနည်းဆုံးပေါင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပါသည်။
– အစောပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖရဲသီး, လုနီးပါးဘာမျှအဓိကရိတ်သိမ်းပြီးနောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပန်းပွင့်တစ်ဦးဖရဲသီးကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါလိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာ 70-75 တန်ချိန် 70 တန်နှင့်အလယ်တန်း၏ပထမဦးဆုံးစပါးရိတ်ရာကာလနှင့်အတူ 150 ကျော် t / ဟက်တာတစ်ရာသီထဲမှာစုဝေးစေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံပို။ တချို့က hybrids တွေကို, အထိ 200 t / ဟက်တာ၏အထွက်နှုန်းအပ်ပေးတော်မူ၏ – Zvolinsky ကပြောပါတယ်။ – ဖရဲသီးငါမျိုးစပါးနှင့်အတူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်သားရေဘူးတစ်အစိမ်း, အဖြူ, စကျင်ကျောက်, အတူမရှိဘဲ, အနီ, ပန်းရောင်, အဝါရောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ချေး processing များအတွက်ဏုဇီဝဗေဒနည်းလမ်းချေးဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်သည့်အထူးဏုဇီဝဗေဒယဉ်ကျေးမှု၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ ဤရွေ့ကားသက်ရှိအလွယ်တကူအပင်ကစုပ်ယူသောပုံစံထဲမှာ, ခြေးတွင်ပါရှိသောအာဟာရ convert ။ အပြောင်းအလဲနဲ့ချေးဘို့ဏုဇီဝဗေဒနည်းလမ်းများနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်:
TONKEEP ENTERPRISE CO., LTD. အတွက်သော့ချက်ကိုထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အထူးပြု OTR ကိုဘီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ OEM / လိမ္စွမ်းရည်များနှင့်စာနာန်ဆောင်မှုကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့, today.We ရိုးသားစွာဖန်တီးအပေါင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအောင်မြင်မှုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပိုပြီးစတိုင်များ, ကျေးဇူးပြု. ချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
“Ford ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလယ်ထွန်စက် -လယ်ထွန်စက်စျေးနှုန်းများကိုအသုံးပြုလယ်ထွန်စက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုရာတွင်အသုံးပြုဥယျာဉ်ကိုလယ်ထွန်စက်ကရောင်း loader ကိုအတူ”
ဆက်စပ်ပစ္စည်း, HDD များအတွက် system ကိုတည်နေရာ, အလျားလိုက် directional တူးဖော်ခြင်းများအတွက်စက် – horizontal တူးဖော်ခြင်းတူးစင်အများအပြားအမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ် တူးဖော်ဆုံလည် , Staples, ကလစ်များ။
မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဗီယက်နမ်တို့သည် National Resource Governance Institute (NRGI) ၏ သယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အညွှန်းကိန်း ဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွင် ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံများကို အမှတ်ပေးခြင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို နိုင်ငံ ၅၈ခုကို မြန်မာသည် အဆင့် ၅၈ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။21 (ကမ္ဘောဒီးယားက ၅၂ ဖြစ်ပြီး ဗီယက်နမ်က ၄၃ ဖြစ်သည်။)
အရည်အသွေးတွေရေ-ဖရုံမျိုးစေ့များကြဲတွင်ပြည်နယ်နျ Standard 2240-93 ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်။ အစေ့အရညျအသှေးမျိုးစေ့ကြဲ check ပြည်နယ်နျ Standard 4138-02 နှင့်အညီထုတ်ယူသွားတတ်၏။ full-စုံတဲ့မြင့်သောမျိုးစေ့ကြဲရာနှင့် varietal အရည်အသွေးတွေကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောမျိုးစပါးမျိုးစေ့ကြဲသည်။ အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို 1000 ကိုအပိုင်းပိုင်း၏ဒြပ်ထုမှပေးဆောင်ရပါမည်။ မှုနှုန်းနှင့်အထွက်နှုန်းသလိုပဲ, မျိုးစေ့ကြဲ၏အရည်အသွေးအပေါ်သက်ရောက်မှုထားတဲ့မျိုးစေ့များ, ။ မျိုးစပါးအလေးချိန်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအပိုငျး၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြီးထွားလာရာသီကာလအတွင်းစက်ရုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအပင်ပေါက်ရန်အတွက်၏တူညီနေမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ripening druzhnost ။ ထို့ကြောင့်, စံကိုက်ညှိအမျိုးအနွယ်ကိုမျိုးစေ့ကြဲဘို့ပြင်ဆင်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအနွယ်ကို Pre-ကုသမှုရောဂါနှင့်ပိုးမွှားမှခုခံတိုးမြှင့်, ပိုးသန့်ဆေးထွက်ယူသွားတတ်၏, စက်ရုံတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်, အထွက်နှုန်းနှင့်သစ်သီးအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်။ ယင်းနှင့်အတူအညီမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမျိုးစပါးရောဂါများနှင့်ပိုးမွှားဆန့်ကျင် “ယူကရိန်းမှာအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပိုးသတ်ဆေးနှင့် agrochemicals များစာရင်း။ ”
ခြဲစိတ္ကုသခံထားေသာ လူနာထံ ဆရာ၀န္ လာၾကည့္သည္။”ခင္ဗ်ားကို သတင္းသံုးခုေၿပာစရာရွိတယ္၊ တစ္ခုက မေကာင္းတဲ ့သတင္း၊ေနာက္တစ္ခုက ေကာင္းတဲ ့သတင္း၊ အဲ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့အေကာင္းဆံုးပဲ၊ မေကာင္းတဲ ့သတင္းက စေၿပာမယ္၊မၿဖတ္ရမဲ ့ခင္မ်ားေၿခေထာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့မွားၿဖတ္မိတယ္၊ေကာင္းတဲ ့သတင္းကေတာ ့ၿဖတ္ရမယ္ ့ေၿခေထာက္ကိုကြ်န္ေတာ္တို ့ထပ္ၿဖတ္ေပးမယ္….အဲ …..အေကာင္းဆံုး သတင္းကေတာ့ေဘးခန္းက လူနာက ခင္းဗ်ားရဲ ့ရွဴးဖိနပ္ကို သူ၀ယ္မယ္တဲ ့”
လွန်တူးဖော်စက်များ – အထူးကိရိယာများကို အသုံးပြု. ပိုက်လိုင်းများကိုတင်သောတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တူးဖော်ခြင်းအလုပ်လုပ်များ၏လက်ခံသည်မြေတွင်းထဲသို့တတ်၏။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်မှဝင်ရောက်ခွင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤနည်းလမ်းကိုပိုက်လိုင်းများကိုတင်သောအဘို့သင့်လျော်သည်သံမဏိ, ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပိုက်၏တရာမီတာမှနည်းလမ်းပိတ်ပစ် (100 – အချင်း 1700 မီလီမီတာ) ။ ဒါဟာမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်အများဆုံးသွေဖည် 30 မီလီမီတာထက်မပိုပါဘူး။ ပိုက်လိုင်းသူ့ဟာသူ sagging မရှိဘဲချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ရထားလမ်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးဇုန်အိမ်များအောက်မှာပိုက်ကိုတင်သောတဲ့အခါဒီနည်းလမ်းမကြာခဏဆွဲငင်အား sewerage mounting များအတွက်အသုံးပြုသည်။
သူများအမြင်မှာယဉ်ကျေးမှုကိုပြသလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ဖက်လူကို သမားရိုးကျမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်၊သူသုံးတဲ့ဝါကျစကားလုံးတွေကိုပဲ ပြန်ပြန်အသုံးပြုပြီး သူပြောသမျှအလိုက်သင့်လိုက်ထောက်ခံမယ်။ဒါပေမယ့် ကြာလာရင် ဒီစကားဝိုင်းကပျင်းစရာကောင်းလာမှာပေါ့။ဒါဆိုရင် ဘလိုနည်းနဲ့ပြောကြည့်မလဲ?
အသီးခြံရိတ်ဖို့မစတင်မီဆုံးရှုံးမှုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရာအလုပ်ကိုထွက်သယ်ဆောင်။ ။ သီးနှံများ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်လမ်းလက်အောက်တွင် – ဤဘို့ 25-40 မီတာတစ် width ကိုအပင်များနှင့်အသီးအပွတင်းပါးအတန်းမှာထံမှရှင်းလင်းရေး၏ strips တွေသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမှည့်သောအသီးကိုရှေးခယျြနှင့်အိတ်ဒါမှမဟုတ် 3-5 pc ၏အမှိုက်ပုံအတွက်ထမ်းစင်ပေါ်တွင်သူတို့ကိုဖြိုဖျက်နေကြသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကအလုပ်အတူ site ပေါ်တွင်လူများအားလုံးလှုပ်ရှားမှုနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချနေကြတယ်, စက်ရုံနီးပါးပျက်စီးသည်မဟုတ်, ထိုနုအသီးအပြည့်အဝရငျ့ပေးစွမ်းသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်3မီလီမီတာအထူတစ်သံမဏိချွတ်နေတဲ့လက်စွပ်နှင့်တူသည်, arcuate ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်စွပ်ကြီးစွန်းမှတစ်ကွေး welded ။ ယင်းကို arc-လှံတံကိုယျခန်ဓာကိုကွေးဖြင့်ပြွန်တစ်သံမဏိတစ်ဝက်လက်မအရွယ်အစိတ်အပိုင်း welded ဖြစ်ပါတယ်။ လှံတံအရှည်အထိနှစ်ခုမီတာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လွယ်ကူသောသိုလှောင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမီတာအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိမဟုတ်စေ။
ဆိုေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါစကားေျပာပံုစံေလးေတြဟာ စကားဝိုင္းတိုင္းမွာေတာ့ အသံုးျပဳမသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဒီအသံုးအနွဳန္း၊အေျပာအဆိုေတြဟာ သင့္ကိုတပါးသူနဲ့ကဲြထြက္ေစေနတာေၾကာင့္ သင့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးေပ်ာ္ရသလို သင္ပါတဲ့စကားဝိုင္းကလည္း အလိုလိုစိုေျပေနမွာပါ။သင္နဲ့ဆံုဖူးသူေတြလည္း တစ္ခါမိတ္ဖဲြ့စကားေျပာဖူးရုံနဲ့ေမ့ေပ်ာက္ဖို့မလြယ္ေတာ့ဘူးေပါ့။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာ ဈေးကွက်Leaderအဖြစ် မကြာခင် ရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွန်စက်အများဆုံး ရောင်းချဖို့ဆို တာထက် သုံးစွဲသူ၊ နှစ်ခြိုက်သူအများဆုံးဖြစ်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုYAN GON TRACTOR မှ ဒါရိုက်တာ မစ္စတာအက်ဒီးဇင့်က ပြောဆိုသည်။
ထားရှိ manholes လိုင်း cornering သို့မဟုတ်ပူးတွဲမှု၏ပွိုင့်အနီး။ သူတို့ကိုအကြားအကွာအဝေးကို 40 မီတာကနေစတင်ရပါမည်။ အားဖြည့်ကွန်ကရစ်ကွင်း၏အလောင်းတော်ထား manholes ။ ဒီဇိုင်းအတိမ်အနက်ကိုမိလ္လာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မူတည်ပါသည်။
အဆိုပါ HDD လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲနေတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အားလုံးလေယာဉ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုမိုနီးကပ်စွာအဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းခေါင်း သာ. ကြီးမြတ်သည့် bit နဲ့မြေပြင်ကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိတပ်မက်လိုချင်သောအထောင့်၏ထွက်ပေါက်မှအထက်သို့ရှုံး, ထွက်ပေါက်အမှတ်တည်ရှိသည်။
“ရောင်းရန်ရှိသည် Loader တွေနဲ့သေးငယ်တဲ့လယ်ထွန်စက်ကိုအသုံးပြုရှိရာယောဟနျသမင် gator တာယာဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်အရပ် -ဘယ်မှာဆရာယောဟနျသမင်မြက်ရိတ်စက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ”
ဒါဟာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးတပ်ဆင်မှုအတွက်စုရုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်စောစောပိုက်လိုင်းပျက်ကွက်, ပေါက်ကြားပေါ်ပေါက်ရေး, ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အခြားအဓိကပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုမေ့လျော့လို့မရပါဘူး။
သဇင္ေရေက်ာ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း ဧက ၄၀၀ ကို ဧရာ၀တီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေအာင္ အမိန္႔ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္မွာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေပးၿပီး ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက ဖ်က္သိမ္းေပးပါရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမျိုးသည်အလွန်ထိရောက်သောကုန်ကျနှင့်လည်းမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောဝင်ငွေဆောင်တတ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်၏ကွာရှင်းစဉ်အတွင်းလူငယ်အားပေးပြီးမှရပါမည်။ အမြတ်မှစီးပွားရေး, သငျသညျဝက်၏အနည်းငယ်စဉ်မြေးဆက်ရောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအများအပြားအချက်များကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာဝက်၏အဆင်ပြေလူနေမှုအခြေအနေများစေရန်အစားအစာ (အရည်သို့မဟုတ်အခြောက်အပုံစံကို) ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အစားအစာရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ပါကဥပစာကိုရှာအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
တူးဖော်ခြင်းများနှင့်ရေတွင်းတစ်ပိုက်လိုင်းယူနစ်တန်းစီများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုခွဲနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအ သို့ဖြစ်. ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်, ထို့နောက်ကောင်းစွာတူးနှင့်ခွဲခြားဘယ်မှာ တူးဖော် tools များ, ပြွန် Drags ။ အခါတူးဖော်ခြင်းနည်းနည်းလမ်းခင်းပိုက်၏တိုးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပေါင်းစပ်နည်းလမ်း။
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအုတ်, အုပ်ကြွပ်နှင့်လုပ်ကွက်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အကြီးစား volumes ကို, များသောအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရေကြောင်းအသစ်စက်စက်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစံပလက်ဖောင်း, အမိန့်ပေးပို့တော်မူသောငါတို့၏အချိန်, ဖောက်သည်များအတွက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့အတိုင်းအတာ (-; width ကို – 2,45 မီတာ 13.6 မီတာအရှည်) နှင့်အတူယူရိုစံလော်ရီကုန်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် dimensions EUR pallet ။
ဝန်ထမ်းများကုန်ကျစရိတ်အတွက်နိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချ။ ဝက်ချေးရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဘက်တီးရီးယားတဦးတည်းအလုပ်သမားသုံးရာဝက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားကဘက်တီးရီးယားနဲ့အစားထိုး။
ျပည့္ျပည့္စုံစုံေျဖၾကားေပးသည့္အတြက္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည့္ အေဆာက္အဦတခ်ိဳ႕သည္ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ယင္းအေဆာက္အဦမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ဦးစီးဌာနက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦ တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦ စစ္မွန္ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက နည္းဥပေဒ ၁၇ အရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပး စစ္ေဆးေစၿပီး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည္ဟု ပါရွိပါေၾကာင္း၊ မုသင္ေက်း႐ြာအတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထဲ၌ ေစတီပုထိုးအေဟာင္းတစ္ခုရွိၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့့္ အစိုးရသက္တမ္းတြင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကို တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ထိုစာသင္ေက်ာင္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္ မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုေစတီကိုထားရမည္ဆိုပါကလည္း ထားၿပီး မထားရပါကလည္း ေစတီအေဟာင္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ဆရာမႀကီးက စာတင္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသသည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ပါ အသိအမွတ္ျပဳေပးေစလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပေမးျမန္းပါသည္။
သင်၌အားကြီးသောသူကဲ့သို့ခံစားရလိုသလား? သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကလောင်ထဲကကပ်ပိုက်လိမ်! ပင်ပန်း? မိမိတို့လက်နှင့်အတူအလျားလိုက်တူးဖော်သေးငယ်တဲ့စက်မှုလယ်ယာ၏ပုံစံအတွက်အပိုဆုအားလက်ခံတွေ့ဆုံထိုအခါ – pin ငှါ, ပိုက်သို့ vdet အခြားအလယ်သို့ welded ဖြစ်ပါတယ် – ယင်း၏ဝင်ရိုးပြွန်ဝင်ရိုးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်နိုင်အောင်။ အခုဆိုရင်အခမဲ့ဆုံးလာကြတယ် (ဖြစ်နိုင်ရင်စက်မှု) သို့မဟုတ်မော်တာ (တော်လှန်ရေး၏လျှော့ချရေးနှင့်ပါဝါလျှော့ချတိုးပွားလာ) မှလုံခြုံနှင့်လည်ပတ်စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အဦများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်သံလမ်းအောက်မှာပိုက်လိုင်းများကိုတင်သောတဲ့အခါဒီနည်းလမ်းအသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစရေ, ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း, ရဆေိုး၏ installation ကိုပို့ချအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ တစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့မြန်နှုန်း: အပြင်ဒီနည်းလမ်းကိုကြီးမားသောအချင်းပိုက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေအခြားအားသာချက်များရှိပါသည်။
“ကိုယ့်ဆရာယောဟနျသမင်ဆေးသုတ် ယောဟန်ဂျွန်ငါ့ကိုအနီးရှိလယ်ထွန်စက်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် deere”
မိမိတို့လက်နှင့်အတူအလမ်းအောက်ထိုးဖေါက်ခြင်း Make – ကအတော်လေးဖြစ်နိုင်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အလျားတဆယ်မီတာထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျကိုစတင်ခင်မှာ, ရှိသမျှလိုအပ်သောပြင်ဆင်လော့။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
အဘိတ်။ အပူ၏တင်သောယင်း၏မျိုးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျစနစ်စေလိုလျှင် အတင်းအကျပ်စောင်ရေ, ကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်ကလာမယ့်မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင်ပိုက်လိုင်း၏ installation အာရုံစိုက်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါဟာဿုံဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်လျော်သည်။
ထိုအကြီးထွားလာဖရဲသီးများအတွက်အခြားအရေးကြီးသောအခြေအနေမခွဲခြားဘဲသင် Urals နှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယားရှိသူတို့ကိုကြီးထွားဖို့မော်စကို၌ရှိကြ၏ရှိမရှိ၏, ဖရဲသီးပေါင်းပင်ကနေဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေကြရသည်။ သူတို့ပဲကြီးထွားဖို့စတင်နေကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အချိန်မီနှင့်အရည်အသွေးပေါင်းပင်ဖြစ်ရပါမည်ဒါမှသင်ရုံကြောင့်ဤအပေါင်းပင်တစ်သီးနှံဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
conies lazhimentami နှင့်ရိုးနှင့်အတူလယ်ထွန်စက် onboard ကွဲပြားခြားနားသောအချင်းပိုက်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အုတ်နှင့်ပိုက်: ပျဉ်ပြားနှင့်စံစက်ကုန်စည်အမျိုးမျိုးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အမြတ်အစွန်းဘက်ခန္ဓာကိုယ် KAMAZ ဆုတ်စျေးနှုန်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အလားတူတင်သွင်းထုတ်ကုန်ထက်အများကြီးနိမ့်။
လုပ်ငန်းများ၌တိရိစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်အထဲတွင်ပါရှိသောဘက်တီးရီးယားကူညီပေးသည်။ ခေတ်သစ်လယ်ယာမြေ, ကျွဲနွား, ကြက်ဘဲနှင့်ဝက်တွင် Non-ဖြုတ်အမှိုက်သရိုက်များအဆုတ် Semi-အမြဲတမ်းအဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဤသည်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်များစွာပေးပါသည်။
ဥပမာ ေရႊတစ္က်ပ္သားသည္ ပုဆိုးအထည္ ၅ဝဝဝ ႏွင့္ညီမွ်သည္ ဆိုပါစို႔။ ေရႊတစ္ပဲသား၏ေစ်းမွာ ပုဆိုး ၃၁၂ ဒသမ ၅ ထည္ျဖစ္မည္။ သို႔ မဟုတ္ ေရႊတစ္က်ပ္သားသည္ ဟို တယ္၌ အခန္း ၂၅ ခန္း တစ္ည ငွားခႏွင့္ညီသည္ဆိုပါစို႔။ ေရႊတစ္ပဲ သားသည္ အခန္း ၁ ဒသမ ၅၆ သို႔မဟုတ္ ေရႊတစ္မူးသားသည္ အခန္း ၃ ခန္း တစ္ညငွားခဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ၏ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းသည္ ေငြ၏ ဘက္မွ် ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ စြမ္းအား (equilibrium purchasing power of money) ကို တိုင္းတာႏိုင္သကဲ့သို႔ လူတို႔သည္ ေရာင္းဝယ္ေသာကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုတြက္ ခ်က္ရာတြင္ ေရႊ၏တန္ဖိုးကို ဗဟို ျပဳ၍တြက္ခ်က္ေရာင္းဝယ္ၾကပါသည္။
5. ရည်ညွှန်း data တွေကိုယူပါ။ ခြေး 1 တစ်တန် biogas 65 ကုဗမီတာအထိပေးသည်။ 1 ကုဗမီတာ၏ကယ်လိုရီတန်ဖိုး။ မီတာ။ biogas2ကီလိုဝပ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဤအနံပါတ်များကိုပွားခင်မှာအကောင့်ထဲသို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကို biogas စက်ရုံအတွက် biogas ၏စားသုံးမှုယူ – 50% .Itogo, ဝက်ချေး 1 တစ်တန် 65 ကီလိုဝပ်နာရီအပူပေးသည်။
biogas သို့ installation အပြောင်းအလဲနဲ့ချေး, ကျယ်ပြန့်ဥရောပအတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ ဤသည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများအတွက်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဥရောပစျေးနှုန်းများအဖြစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့ချေးရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အပင်ရှိသည်သောသူအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလယ်သမား, ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းဝယ်ယူဘို့ဦးစားပေးချေးငွေနှင့်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့အတွက်လျှပ်စစ်မီးများတပ်ဆင်ခြင်းမှာမိမိတို့အလုပ်ထုတ်ရောင်းချခွင့်ရှိသည် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်များ လျှော့စျေးမှာ။ ရုရှားအခြေအနေများအတွက်, အဲဒီ settings တွေကိုကြောင့်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များလွန်းဘုံမရှိကြပေ။
TONKEEP ENTERPRISE CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ လယ်ထွန်စက်တာယာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့် clients များ ” အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations ဤထုတ်ကုန်များပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ “EKOUMVELT” ဟုနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာအတွက်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာတိုတောင်းသောကာလ၌မြေဩဇာနှင့်၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်း၏ပို့ကုန်ထွက်သယ်ဆောင် စံတန်ဖိုးလုပ်ရပ်များ။ ကျနော်တို့သန့်ရှင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ပြုအလုပ်လိုက်နာမှုအတည်ပြုအားလုံးလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများသည်။
Rovani အရန် haulage device ကိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် joints inekti- ထိုးဖောက်မှုစုဆောင်းတစ်ဒိုင်းလွှားကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများရွှေ့ပြောင်းမျက်နှာကိုမှာကျောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များအရေအတွက်, သို့မဟုတ် monolithic device ကိုငြိုးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနံရံပါဝင်သည်။ အောက်ခြေမှာကျောက်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပျဉ်ပြားများကို non-စက်မှုလယ်ယာလုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့်လက်၌ဖောက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်မားသောရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်အဖြစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအကျင့်ကိုကျင့်၏ရှုပ်ထွေး, ဘုတ်အဖွဲ့အမျိုးအစားအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုသည်။ မြေပြင်အခြေအနေများခွင့်ပြုသည့်အခါတိုင်းထိုကွောငျ့, စက်မှုလယ်ယာဒိုင်းလွှားကိုရှုပ်ထွေးသောကိုအသုံးပြုရပါမည် (ပုံ။ 21.10, က c) ။မြေပြင်ပျော့ကျောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် visor ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဒိုင်းလွှားများဖြတ်တောက်ခြင်းအောက်မှာရှိပါတယ်။ အောက်ခြေမှ primer 10-15 စင်တီမီတာ၏အဆုံးသည်ဒိုင်းလွှားဖို့မရကြဘူး။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနက်ရှိုင်းမွေးမြူရေး, မြေဆီလွှာ၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်ရေလှောင်ကန်အခြေအနေများ, နှင့်ဒိုင်းလွှားဖွဲ့စည်းပုံ၏အချင်း slopes, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်တဦးတည်းနံရံလက်စွပ်ရဲ့ width ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေ။ မြေဆီ mobility, နှင့်နဖူး (ပုံ၏မျက်နှာကိုမှဆွဲထားကြ၏အဆောက်အဦးများနှင့်အဆောက်အဦများ၏စုဆောင်းအထက်တွင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်. ။ 21.10, က c) ။မြေဆီလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးထိပ်ကနေအောက်ခြေအထိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်မျက်နှာ၏အထက်ပိုင်းမှာ fixed ပထမဦးဆုံးမှာဖယ်ရှားနေသည်, သို့သော်တပ်မက်လိုချင်သောအတိမ်အနက်ကိုမကျြနှာကိုနဖူးမှမြေဆီလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအပြီးနောက်တဖန်ခိုင်ခံ့စေ။ ထိုအခါအောက်ခြေမျက်နှာမှာစွဲစေကိုဖယ်ရှားမြေပြင်သည်နှင့်ပြုပြင်တာတွေလိုက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ဘို့အသေသတ်ခြင်းနဖူးပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝအမြင့် attach ။ လျော့ရဲရဲနဲ့သဲ၏မျက်နှာကိုထဲမှာခဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိုနည်းတူ။
ဖရဲသီးမိသားစုဖရုံသီးပိုင် – ဖရဲသီး (Citrullus), ဖရုံ (Melo အဘိဓါန်) နှင့်ရွှေဖရုံသီး (Cucurbita) – Cucurbita-seae အဆိုပါ genus ၏ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အရေးအပါဆုံးသုံးပါဝင်သည်။ •အများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအလွန်ဆင်တူသည်ဤ Genera ပိုင်စက်ရုံများ, နှစ်စဉ်, ။
ငါ) ကိုသာမန်စွန့်ပစ်ထဲကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ထင်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကြလိမ့်မည်ဟုဘယ်တော့မှ)) ဥပမာ, ခြံပေါ်ရွာက set up လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံ၏အလုံအလောက်ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်လျှပ်စစ်မီးစိတ်ကူးပေမယ့်မရပါဘူး။ ထိုအချေးထူပြောနေတယ်နှင့်လျှပ်စစ်မီးပေးချေရန်မလိုအပ်) ဆောရီး, ကြှနျုပျတို့ဥရောပမဟုတ်) နှင့်ချေးအမှိုက်ပုံပဲ, အဲဒါကိုအတွက်ပိုးကောင်များတူးပုဂ္ဂလိကပန်းဥယျာဉ်နှင့်ငါးဖမ်းသမားများအတွက်အခိုးခံရသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကောင်းပါတယ်။
အိန္ဒိယလုပ်ထွန်စက်များကို ESCORTS ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးသို့ ထွန်စက်များ တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ထွန်စက်စီးရေ ၁çဝ၀ဝ ကျော် ရောင်းချပေးထားကြောင်း၊ တရုတ် ထွန်စက်များနှင့်အပြိုင် ဈေးကွက်ဝေစုအများဆုံးဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ကျွန်မအဓိကဝင်ရိုးစွန်း၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီဖန်ဆင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြား, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲ, အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်-connection အပိုဆောင်းချောင်းတွေ (တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို), ရှိသည်။ အပိုဆောင်းချောင်းတွေနှစ်ခုမီတာအထိရှိနိုင်ပါသည်။
အလျားလိုက် directional တူးဖော်ခြင်း၏နည်းပညာကိုတိကျစွာမြေဆီသို့၎င်း၏ထိုးဖောက်မှု၏အတိမ်အနက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မြေပြင်အောက်၌လေ့ကျင့်ခန်း၏တည်နေရာခြေရာခံသောစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အထူး devices များ၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်တယ်, ကဖြစ်နိုင်သမျှပါစေ။
စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာနမှတဆင့် အရစ်ကျဖြင့် ရောင်းချသွားမည့် အစီးရေး ၁၀ဝ၀ ၏ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ပါက လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာ မျိုးစုံကိုပါ ဆက်လက်၍ အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချနိ်ုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက် ရှိကြောင်း၊ လယ်ထွန်စက်များ၏ အရည်အသွေးကို စိတ်မပူကြရန်နှင့် အရည်အသွေးပိုင်း အတွက် အာမခံကြောင်း စက်မှု လယ်ယာဦးစီးဌာနက ပြောဆိုသော်လည်း မည်သည့် နိုင်ငံထုတ် စက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းကိုမူ ဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။
“လယ်ထွန်စက်တန်ဖိုးများ -သမင်လယ်ထွန်စက်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ deere”
မော်ဒယ် 45143 ထရပ်ကား – တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားအဆင့်အထိအဘို့ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကို – ကိုဝယ်ခြင်းငှါအခြားအကြောင်းပြချက် KAMAZ-45143။ သူတို့အနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသိသောပြသခဲ့သည်ရှိရာ၎င်း၏ပြိုင်ကား Dakar များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများဒီအမှတ်တံဆိပ်၏ကုန်တင်ကားကြီးသားအပေါင်းတို့, အခက်အခဲများနှင့်အတားအဆီးများရှိနေသော်လည်း, သူတို့ကကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်သဲခုံများနှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင်းခဲမရဖြစ်ကြသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ installation ။ ကြီးမားတဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းအကြားကိုတိုးချဲ့ဌာန၏အဆိုပါဆေးထိုးပြွန်, ဓါတ်ရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ဝင်းဒိုးကိုထားလိုက်တော့အောက်မှာ။ ဤသည်တယောက်ကိုတယောက်ဆောင်းပါးတိုကနေပြုမိသည်။ ပိုက်ကြမ်းပြင်ဧရိယာ၌ထားခြင်းဖြစ်သည်ကိုလျှော့ချ။ ရလဒ်အဖြစ်လျော့နည်းပိုက်လိုအပ်သည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသည့်စနစ်။ အမှန်တကယ်အပြိုင်တွင်သို့မဟုတ်စီးရီးအတွက်ဖြစ်စေချိတ်ဆက်အပူ devices များ။
လွန် ခဲ့တဲ့ လေးငါးရက်လောက်က နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုက သတင်းတပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို ဖတ်လိုက် ရတော့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင် ဒီလိုမျိုး အကျိုးဆက် ရှိပါ့လားလို့ မှတ်သားရပါတယ်။ ဘာကိစ္စလဲ ဆိုတော့ အစိုးရဝန်ကြီးတစ်ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသုံးစရိတ်များနေတဲ့ အပေါ်မှာ ဝေဖန်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို အဝေဖန်ခံရပြီး နောက်တော့ အဲဒီ ဝန်ကြီးဟာ တာဝန်သိသိနဲ့ သူ့ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဝန်ကြီးရာထူးမှာ ရသလောက်တော့ နေဦးမဟဲ့ဆိုပြီး ကုတ်ကပ်နေတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။
ရုံရုရှား၏အပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေများအတွက်အလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝန်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သောပြည်တွင်းအော်တိုဈေးကွက်ထဲမှာအထူးမော်တော်ယာဉ်များ၏လိုငွေပြမှုရှိ၏အခါစက် 6520 ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုသာ 90 ရဲ့စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kamas မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံကြောင့်ကာလအဘို့များစွာသောမော်ဒယ်များဖြန့်ချိထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များသူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရှေ့ပြေးပုံစံမှသိသိသာသာယုတ်ညံ့များမှာပေမယ့်။ တက်ကြွစွာ KAMAZ-65115, သူ့စွမ်းဆောင်ရည် 15tonn အတွက်စွမ်းရည်ခဲ့သောအသုံးပြုသောပေမယ့်, အချိန်ကာလမှမလုံလောက်ဘူး။
လူမှုရေးဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်မှုများသည် ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ် နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ တည်ရှိမှု နှင့် အောင်မြင်မှုသည်လည်း လူသားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်သော အခြေအနေများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Hercules Logistics သည် အထက်မြန်မာပြည်ရေးဘေးကူညီရေးအတွက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဗုပ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်စုကြီး ကျေးရွာမှ လယ်သမားတဦးဖြစ်သူ ဦးသောင်းစိန်က “စစချင်း သိန်း ၃၀ လောက်က အဆင်မပြေဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ၄၊ ၅ သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူး။ အရစ်ကျစနစ်ကိုတော့ ကြိုက်တယ်” ဟု ဦးသောင်းစိန်က ပြောသည်။
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မြန္သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ ျပင္ပေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သမိုင္းပညာ ရွင္မ်ား၊ သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္သုေတသနျပဳလုပ္ေပးပါရန္ တင္ျပလာမႈအရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနသည္ ခြဲေဝရရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြအလိုက္ သုဝဏၰဘူမိသုေတသနလုပ္ငန္းကို ႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္လည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ အထူးအေလး ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန တူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားခြင့္ျပဳေသာ ေရွးေဟာင္းကုန္းမ်ားကိုသာ တူးေဖာ္သုေတသနျပဳခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား ခြင့္မျပဳေသာ၊ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္ေရွးေဟာင္းကုန္းကိုမွ အတင္းအၾကပ္ တူးေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။
မျက်နှာကိုဒိုင်းလွှားဖို့နိဒါန်း။Shield ကိုသတ္တုတွင်း jib ရိန်းသို့လျှော့ချ, ပြီးတော့ထိုးဖောက်မှု၏ညှနျကွားထဲမှာအောက်ဆုံးထားကြ၏။ တိုက်ရိုက်မကျြနှာကိုဒိုင်းလွှားသို့အထူးယာယီထောက်ခံမှု (အလေးပေး) abut စီစဉ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်နည်းလမ်းများဖြင့်မိတ်ဆက်သည်။ အသေသတ်ခြင်း၏အရပျမှာရိုးမြို့ရိုးအတဲ့မြို့ပတ်ရထားအဖွင့်အချင်း, မျက်နှာကိုဒိုင်းလွှားသို့ input ကိုလိုအပ်ဒိုင်းလွှားကိုကျော်လွန် 100 မီလီမီတာအချင်းစွန့်ခွာ။ ရေလှောင်ကန်၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာန်းကျင်သတ်မှတ်ထားဘို့ obdelku ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများတူးဖော်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အမျှ။ ဒိုင်းလွှားအပြည့်အဝမြေ၌ထိုင်သည်ပထမဦးဆုံး 10-12 မီတာစုဆောင်း abutment, disassembled ဖယ်ရှားနှင့်နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ဘောင်ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ။ ထိုအခါလက်တွန်းဘို့ badevoe အခန်းတပ်ဆင်သို့မဟုတ်အဓိကဆားကစ်ဒါမှမဟုတ်အလယ်အလတ်မြေပြင်နှင့်အတူရိုးအဖြစ် badevym အခန်းကျော်စန်းရိန်းတပ်ဆင်ထားရသောအဘို့အ schitoprohodcheskih အကျင့်ကိုကျင့်များအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းထောက်ပံ့သို့ခန္ဓာကိုယ်ရုတ်သိမ်းရေး။
ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခါသုံးသန့်ရှင်းရေး အသီးဖရဲသီးအများဆုံးအပြည့်အဝနဲ့အောင်မြင်စွာစက်မှုလယ်ယာ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သော။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားထက် ပို.2ဆတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခြုံငုံအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်, 34-ခြံလျှော့ချနေကြသည်။
သီးနှံကဏ္ဍအဖြစ်ဖရဲသီးသည်လွန်ခဲ့သောရာစုအလယ်၌အကြှနျုပျတို့၏နိုငျငံတှငျပျေါထှနျးခဲ့သညျ။ လောလောဆယ်ဖရဲသီးအောက်မှာဧရိယာထက်ပိုမို 1 စက်။ Ha ဖြစ်ပါတယ်။ ဖရဲသီး CIS ၏ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအောက်မှာဒေသများ၏အရွယ်အစားအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအဆင့်။
အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း လႉဒါန္းရတဲ့ကုသိုလ္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔က ဆင္းရဲတယ္ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ရပါတယ္.. ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္လံုး မတတ္ႏိုင္ရင္ အုတ္တစ္ခ်က္ သဲတစ္ပြင့္လႉဒါန္းလိုက္ပါ။ အဲ့ဒီအလႉဒါနထဲမွာ မိမိရဲ႕သဒၶါအရင္းခံတဲ့ ဒါနကုသိုလ္ေတြ ပါဝင္သြားပါၿပီ။ အဲ့ဒီလို အျမဲလိုလို လႉဒါန္းေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ အပါယ္ေလးပါးက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ က်ခံသုံးစြဲမႈအေျခအေန၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားကို မည္သည္‌့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မၽွေပးေလ်ာ္ပါသည္ဆိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက်ခံသုံးစြဲမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေငြခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဝင္းကေက်း႐ြာ၌ တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းကုန္း (၄) ကုန္းအနက္ ပုိင္ရွင္ရွိေသာ ကုန္း (၃) ကုန္း၌ ၿခံပိုင္ရွင္႐ြာသားမ်ား ကိုယ္တိုင္တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႕အား သေဘာတူစြာ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ား၊ ေဒသခံၿခံပိုင္ရွင္႐ြာသားမ်ား နစ္နာမႈအတြက္ တစ္ကုန္းလၽွင္နစ္နာေၾကး က်ပ္ (၅) သိန္းေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဝင္းကေဒသတူးေဖာ္မႈ ကုန္းမ်ားကို သံဇကာၿခံစည္း႐ိုးခတ္ ကာရံထားရွိၿပီး တူးေဖာ္မႈကုန္းသုံးကုန္းကို သြပ္မိုးျဖင္‌့ အမိုးမိုး၍ ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္မႈ ကုန္း (၄) ကုန္းအား သြပ္မိုးျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီးမွ မိုးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အလုပ်လုပ်ခဲ့ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးတိကျအပေါက် Jumper ထွက်လှည့် – ရည်ရွယ်လည်ပတ်ဆီသို့တစ်ဦးတိမ်းညွတ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ပိုက်ပေါ်တွင်အံသွားထွက်ခုတ်ဖြတ်။ ထိုအခါသွားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဦးချင်းမှအနည်းငယ်ခြားပြီးသွားမှေးမှိန်အဓိကပြွန်အချင်းထက် (5-7 မီလီမီတာ) အနည်းငယ်ပိုကြီးခဲ့သည်။ ဒါကတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ဖွာကနေရုပ်သံလိုင်းမြို့ရိုးကိုကယ်တင်မည်။
ယခင်နည်းလမ်း၌ရှိသကဲ့သို့, ထို marking မြို့ရိုးအအဆောက်အဦများအပေါ်အထဲကယူသွားတတ်၏။ Stroebe Creating – ဖုန်မှုန့်ပမာဏများလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အလွန်အချိန်ကုန်အလုပ်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်မပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းသင့်လျော်သောပွညျ၏ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့မခွဲခြားဘဲသင်ရွေးချယ်လယ်ယာအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုမဆိုအမှု၌လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၏သင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မြေယာဝယ်ဖို့အရာကိုသိသည်မှန်လျှင်, သငျသညျမတတျနိုငျ, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်အမြဲငှားပြည်နယ်ကနေမြေယာယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လယ်ယာဝင်ငွေကို generate မှအစပြုသည့်အခါပြီးတော့, သင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်မြေယာများဝယ်ယူစဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
“ရောင်းရန်ရှိသည်ဂျွန်မင် loader ကိုလယ်ထွန်စက် _ယောဟန်သည်သမင်ဒရယ် js40 ဝယ်အသုံးပြုသောလယ်ယာစက်ပစ္စည်း”
“ယောဟနျ ရောင်းရန်လယ်ထွန်စက် loader ကို attachment များကိုအသုံးပြု”
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္း ႏွင့္(၃)ႀကိမ္တုိင္ ေတြ႔ဆံုတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ခေတ်မီပစ္စည်းများအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာများအကြားအလက်ဇန်းဒါး Zakrevskii, ထိုအန်ဂျီအို “Agrotehkomplekt” (စိန့်ပီတာစဘတ်, မွေးမြူရေးခြံ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး) ၏အကြီးအကဲဖြစ်သူအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ (နယ်သာလန်) ၏ Wopereis အယူအဆအတွက်တင်ပြဥရောပနည်းပညာ, အာရုံစိုက်။ “ဒီနည်းပညာကဥရောပမှာနို့ထွက်ခြံများတွင်အသုံးများဖြစ်ပါသည် – ဟုသူကဆိုသည်။ – နို့ထွက်နွားတွေ centrifugal ပန့်များအားဖြင့်ချပေးမှအတော်လေးလွယ်ကူသည်ဖြစ်သောအရည်ချေး, ထုတ်လုပ်ရန် silage အပေါ်ကျွေးမွေးကြသည်။ အဘယ်အရာကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်နေဆဲခြစ် (ခြစ်) ကဖယ်ရှားခြင်းနှင့် 1.7 မီတာနောက်ချေး transverse ရုပ်သံလိုင်းနက်ရှိုင်းသို့ဆင်းသည်။ ကပြည့်စုံသည်သောအခါ, ခြေးတဲ့သိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့မှရွေ့သွား၏။ ”
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ခြံများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံတစ်ဦးချွန်ထက်တိုးလည်းမရှိ။ နီးပါး 2000 ခုနှစ်အပြီးတည်ဆောက်ထားသမျှသောလုပ်ငန်းများတိရစ္ဆာန်အဘို့ကိုသာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်ခေတ်မီအဆောက်အဦသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ချေး၏အပြောင်းအလဲနဲ့အမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီကုသိုလ်(၇)မျိုးစလုံးဟာ သောတာပန်များရဲ့ အပါယ်လေးပါးမှ လွတ်ကင်းသလို လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေမှာလည်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ မသိသေးသူများ ရှိပါကလည်း သိပြီးသူများက တဆင့်ပြန်လည် ပြောကြားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ဤကုသိုလ်(၇)မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်မျိုးသော်လည်းကောင်း၊ ၇-မျိုးစလုံးကိုသော်လည်းကောင်း အမြဲတမ်း ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားက သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားတူပြီး အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ အတိအလင်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ရုံနဲ့တော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ “နိဗဒ္ဓ”ဆိုတဲ့ပါဠိက ပါနေတော့ အမြဲတမ်းဝတ်ထားပြီး ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါမှလည်း သေခါနီးအချိန် ဂတိနိမိတ်တွေ ကောင်းမှာ။ ဒါ့ကြောင့် အပါယ်လွတ်ချင်သူများအနေဖြင့် ဤ(၇)ချက်ကို ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါဘုံဘိုင်မှအနည်းငယ်လျှောစောက်တွေနဲ့နံရံကနေ 20 မီလီမီတာ – များအတွင်းပို့သည့်အခါ 15 အကွာအဝေးစွန့်ခွာရန်လိုအပ်ပေသည်။ အစွန်းရောက်အနိမ့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်ကွန်ယက်ကိုပလပ်ရေထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ချထားပါသည်။ ဒေါင်လိုက် downcomer ကနေအများဆုံးသွေဖည် 2mm ကွန်ယက်ကိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်နံရံတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်ဖြတ်သန်းခဲ့လျှင်ဤဒေသများနောက်ထပ်သံမဏိမိုးမိုးသဘောထားပြင်းထန်၏ခိုင်ခံ့စေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုများကို သီးခြားလေ့ကျင့်ထားသည့် အတ​ွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့များမှ ချို့ယွင်းမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်လှောင်ရုံအတွင်းသို့ ဝင်လာသော ကုန်စည်များကို စစ်ဆေးပြီး စာရင်းရေးမှတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တန်းဖိုး ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုများမှာ ကုန်တင်ခြင်း၊ စုပုံခြင်း၊ အြပစ်အနာ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် serial number (သို့မဟုတ်) item မှတ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သတ်မှတ်အထုပ် (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ် အထုပ် (သို့မဟုတ်) နေရာများတွင် ကုန်စည်ဗူး သိုလှောင်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ပြုပြင်အပိုင်း၏အထက်ပိုင်းအလယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဇီဝလောင်စာအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ကိရိယာ biogas နှင့်၎င်း၏ဖိအားပေးမှုများရွေးချယ်ခြင်းကိုစီစဉ်ပေးထားပါသည်သောတံဆိပ်ခတ်ပေါက်, တပ်ဆင်ထားသည်။ ဓါတ်ပေါင်းဖိုအတွင်းရှိဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အလိုအလျှောက်အားဖြင့်၎င်းအကြံပေးအဖွဲ့၏ကှဲထှကျတားဆီး, အတွန်းဖွင့်သည်။ အဆိုပါတွန်းတစ်ဦး gasholder ဖို့ဓာတ်ပေါင်းဖိုကနေ biogas ညှစ်ထုတ်လိုက်။ အဆိုပါ bioreactor တပ်ဆင်ထားသည် အပူဒြပ်စင်, ဇီဝလောင်စာ၏ကစော်ဖောက်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။
ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခၚေဝၚ သံုးစြဲၾကေသာ ေငြ၏ဇာစ္ျမစ္မွာ ဘာတာစနစ္ (Barter System) ျဖစ္ပါသည္။ ဘာတာစနစ္တြင္ ကုန္ ပစၥည္းတစ္ခု လက္ဝယ္ထားရွိေသာ လူတစ္ဦးက မိမိအလိုရွိေသာ ကုန္ ပစၥည္းကိုရႏိုင္ရန္ မိမိ၌ပိုလွ်ံေသာ ကုန္ႏွင့္ မိမိအလိုရွိေသာ ကုန္ကို လဲလွယ္ျခင္းကို ဘာတာ စနစ္ဟုေခၚ ပါသည္။ ဘာတာစနစ္တြင္ ႏွစ္ဦး အလို တိုက္ဆိုင္မႈ (double coincidence of wants) အခက္ အခဲကိုႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ စပါး ပိုလွ်ံ၍ အဝတ္အစားဝယ္လိုေသာ လယ္သမားသည္ စပါးကိုအလိုရွိ၍ အဝတ္အစားပိုလွ်ံသူကို တစ္ႀကိမ္ တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းေတြ႕ရန္ ခဲယဥ္း ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးအတိ အက်သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။
“လယ်ထွန်စက် JD _ယောဟန် 2017 လယ်ထွန်စက်”
အားလုံးတင်ပြချက်များသူတို့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာကြပါပြီသောအချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ကြသည်။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ဝယ်လိုအားမျဉ်းကိုပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အများဆုံးသံမဏိပိုက်ထဲမှာ။ ဤသည်မှာပစ္စည်းများ၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမအားနည်းချက်များ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်: တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအချက်များနှင့်ထိတွေ့ထိုကဲ့သို့သောပိုက်ပန်းချီတောင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်၎င်း၏ရှုပ်ထွေးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါ့နာမကို Nikishin Stanislav ငါ Tula ဒေသကနေမိပါတယ်။ ခုနစ်နှစ်အကြာကျွန်မလယ်ယာစိုက်ပျိုးစိတ်ကူး၏စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းကအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ Oka မြစ်အနီးရှိ Tula ဒေသ၌ငါ့အပိုင်ထဲမှာအစွမ်းထက်လယ်ယာ။
လူအတော်များများဟာအပူပိုက်ကိုတင်သောသာပိုက်တစ်လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်ထိုကဲ့သို့သောထင်ရသောရိုးရှင်းသောအလုပ်နောက်ကွယ်မှလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးဖွက်ထားပေးသည်။ ဒါဟာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအေဂျင်စီများကအတည်ပြုခံရဖို့သေချာဖြစ်သောပဏာမတွက်ချက်မှုများနှင့်ရေးဆွဲရေးအစုတခုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာအပေါ်ကျနော်တို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်။ အားလုံးပြီးပြီလက်ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တပ်ဆင်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ဆိုပါစို့။ အင်္ဂါရပ်ဘာတွေလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝ သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝ ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မူ နှင့် တင်ပို့မူ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ကြေးနီ၊ ကျောက်မျက် ရတနာများ၊ ခဲမဖြူ (ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယအများဆုံးထုတ်လုပ်သူ)1၊ အဖြိုက်နက်၊ ခနောက်စိမ်း (ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆဌမ အများဆုံးထုတ်လုပ်သူ)2 ဇင့် အပါအဝင် ဓာတ်သတ္တု ကုန်စည် အမျိုးမျိုး ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
Hinged slope ဗူးခွံယန္တရားအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီးမည်သည့်ခြံများတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗန်းဆည်မြောင်းယူနစ်၏လူမီနီယံပြွန်များ၏လုပ်နေကြတယ်ပါနဲ့။ ဝံဧရိယာပိုက်တစ်ကျင်းပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာဖှငျ့အတူတကွအတူအရာကြီးစွန်းတိုင်အောင်ယင်းမော်တော်ယာဉ်များ၏ဘောင်တွဲနေကြသည်။ ဒါဟာတစ်လျှောက်လယ်ထွန်စက်အောက်မှာမျဗန်း fixed ။ အသီးကိုလမ်းဘက်လှိမ့်သောကြောင့်ဘေးထွက်သွားယူဗန်း၏နောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်း။ ဗန်းသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေအထားထ, အဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါကေဘယ်လ်ကြိုးအားဖြင့်ယူသွားတတ်၏။ သူတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေအထားအတွက်ဆင်ခြေလျှောကို 30 °ဖြစ်ပြီး, ပြုပြင်အတွက် – 6-7 °။
ဝက်ချေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတ်မြေသြဇာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ မြေဆီလွှာနှင့်အတူရောနှောပါကသဲလွန်စဒြပ်စင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်အသုံးဝင်သောတစ်မြေသြဇာကြွယ်ဝသောအလွှာဖြစ်ပေါ်လာသောပေမယ့်လည်ပတ်ဖို့ကတစ်ဦးချွန်ထက်သောအနံ့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲခက်ခဲ။ ထို့ကြောင့်, ဝက်မွေးမြူရေးခြံသိသိသာသာင်း၏အရည်အချင်းစွန့်ပစ်ခြင်းများမေးစရာများရှိနေပါသည်။
တိရစ္ဆာန်များအဘို့ဧရိယာပြတင်းပေါက်ကြမ်းပြင်ဧရိယာ၏ဆယ်ဘို့တဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြမ်းပြင်မှပြတင်းပေါက်ကနေအကွာအဝေး – 1.3 မီတာ။ ဒီအစီအစဉျကိုတိရစ္ဆာန်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အခန်းသို့နေရောင်ခြည်၏ပိုကောင်းတဲ့ထိုးဖောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်။